बैंकहरुले निक्षेप संकलनमा गरेको प्रतिस्पर्धा गलत: गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाल – BRTNepal
बैंकहरुले निक्षेप संकलनमा गरेको प्रतिस्पर्धा गलत: गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाल
बिआरटीनेपाल २०७५ मंसिर २१ गते ४:३५ मा प्रकाशित
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले बैंकहरुले निक्षेप संकलनमा गरेको प्रतिस्पर्धालाई गलत भन्दै सच्चिन आग्रह गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघको साधारण सभामा उनले बैंकहरुले निक्षेप संकलनमा प्रतिस्पर्धा गरेर राष्ट्र बैंकलाई के गर्न खोजेको भनेर प्रश्न पनि गरे ।
यसका साथै उनले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र संचालकहरुलाई गम्भिर र नैतिकवान बन्न आग्रह पनि गरे । ‘तपाईहरुले जनताको पैसा चलाउनु भएको छ । त्यसलाई राष्ट्र बैंकले संवेदनशिल भएर हेरिरहेको छ गभर्नरको भनाई थियो। ।